Maxaa baajiyay Shirkii 3-aad ee uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo? | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Maxaa baajiyay Shirkii 3-aad ee uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo?
Maxaa baajiyay Shirkii 3-aad ee uu ku baaqay Madaxweyne Farmaajo?
Muqdisho (Halqaran.com) – Kaddib markii Khamiistii maanta lagu waday in Magaalada Muqdisho uu ka furmo shirka lagu dhameystirayo arrimaha doorashooyinka ee dalka ayaa baaqday.
Madaxda Dowlad Goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ayaan weli imaamin Magaalada Muqdisho, halka Madaxweyneyaasha Koonfur Galbeed iyo Galmudug ku maqan yihiin Magaalada Ankara ee dalka Turkiga, taasoo meesha ka saareysa suurtagalnimada in shirka uu maanta furmo.
Warar lagu kalsoonyahay oo ay heshay Halqaran News ayaa sheegaya inaanu wax abaabul iyo dhaqdhaqaaq midna ka jirin Aqalka Villa Soomaaliya, halkaasoo uu Madaxweyne Farmaajo qorsheeyay in shirka lagu qabto.
Maamullada Puntland iyo Jubbaland ayaa iyagu ka cago jiiday in shirka uga qaybgalaan Qasriga Madaxtooyada, taasi bedelkeedana waxay Puntland ku baaqday in lagu qabto Garoonka Aadan Cadde, halka Jubbaland ay soo jeedisay in shirkaasi uu ka dhaco goob amnigeeda lagu kalsoon yahay.
Ugu dambeyn, shirkii Khamiista maanta la filaayay inuu qabsoomo ayaa noqonaya kiisii 3aad ee uu Madaxweyne Farmaajo ku baaqay, balse aan qabsoomin.